Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » IJet Airways 2.0: The New Airline
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba ze-India Breaking • Investments • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
IJet Airways izalwe kabusha
Noma iziphi izindaba ezinhle ngaphambili zezindiza eNdiya zifuna ukugujwa. Ngakho-ke, inkulumo yokuvuselelwa kweJet Airways ngemuva kokuthi isonge amaphiko njengoba kwenzeka ngo-Ephreli 2019, ibonwa njengophawu oluhle nolwamukelwa kakhulu.
Isimo esisha sezindiza siza ngomzila wemvuselelo ngokuqothuka.
I-Jet Airways yasekuqaleni yayizinze eMumbai, futhi ukuzalwa kabusha kuzokubona kuseNew Delhi.
Kubhekwe ukuthi kuqalwe ukusetshenziswa kokuhamba kancane kwamazwe omhlaba othwala engxenyeni yesibili yonyaka ozayo ngamathuba okuba izindiza zomhlaba ngokuhamba kwesikhathi.
I-avatar entsha - noma ukuphindukuzalwa - ingavela ngokushesha ekuqaleni konyaka olandelayo, i-2022, yize yayisesilinganisweni esincane.
Isimo esisha sezindiza siza ngomzila ohlukile ongazange uzame ekuqaleni. jet Airways, lapho seliligama eliqinile futhi elihlonishwayo, lizothatha isibhakabhaka ngomzila wokuqothuka wemvuselelo.
Ekuqaleni kuzoba ngumthuthi wasekhaya kuphela kepha ngasekupheleni konyaka ozayo, iJet Airways 2.0 nayo ingandiza iye phesheya. Abaphathi abasha abayichazanga imininingwane yezinhlelo zokusebenza kwamazwe omhlaba, kodwa-ke, imithombo yezimboni ikhombisile ukuthi inkampani yezindiza kungenzeka ibheke umkhakha waseGulf ukuqala kabusha kwawo.
Nakuba iJet Airways yasekuqaleni yayizinze eMumbai, ukuzalwa kabusha kuzokubona kuseNew Delhi. Izoqhubeka nokuba khona okuqinile futhi okuphawulekayo eMumbai futhi, isisekelo sayo sangaphambilini.
UMurari Lal Jalan
Iphethini yobunikazi nayo izohluka. UNaresh Goet bekunguyena obiza izibhamu, kepha manje iqembu elizobumbana eliholwa usomabhizinisi waseNdiya ozinze e-UAE, uMurari Lal Jalan, selizohlala esihlalweni sabantu abadonsa izidumbu. UJalan, ohola uJalan Kalrock Consortium (JKC) uthole inkampani yezindiza yaseNdiya iJet Airways.
Isikhulu esiphezulu sathi le nkampani yezindiza ibheke ukuqala umsebenzi omncane wamazwe omhlaba othwala engxenyeni yesibili yonyaka ozayo.
Imithombo ithi ekuqaleni, ibhizinisi elisha lizoba nezindiza ezingama-50 eminyakeni emi-3, ngenani elilindeleke ukuthi likhule liye ku-100 eminyakeni emihlanu.
Uma lolu hlelo lungaqaliswa, amaflaya nosomabhizinisi bayojabula impela futhi bazobe bebuka okwenzekayo kule nkampani yezindiza ezelwe kabusha.
Ukunwetshwa komthamo womoya kuzoba yintuthuko enkulu, ikakhulukazi njengoba ukutshalwa kwezimali kwe-Air India kusathatha isikhathi esithe xaxa.
Inkampani yezindiza ithe isiqashe abasebenzi abangaphezu kuka-150 ngokugcwele futhi ibheke ukugibela abanye abasebenzi abayinkulungwane kulo nyaka wezimali okhona. Ukuqashwa kuzoba ngendlela yezigaba futhi kuzoba ngokwezigaba zonke.